JOYO cosmetic kambani inogadzira uye inogadzira yehunyanzvi zvigadzirwa zvigadzirwa. Isu tave tichishanda pamwe nemamwe makambani ekuzora uye nyanzvi yekugadzira maartist kubvira 2005.
Zvigadzirwa zveMakeup zvinosanganisira Professional Makeup Palettes, Professional Makeup Brush sets. Idzo zvigadzirwa zvemumvuri weziso, Blush, Lip Gloss, Lipsticks, Loose Powder, Concealers, HD Liquid Foundation, Oiri Yemahara Liquid Foundation, Mascara, eyebrow Powder, Liquid Eyeliner, Cake Eyeliner, Pearl Eye mumvuri, Sealer, Eyeshadow Primer, Makeup. Remover, Bronzer, MaCompact, Akadzvanywa Poda uye Shimmer Powder nezvimwewo .. Hunhu hwezvigadzirwa zvehunyanzvi zvigadzirwa zvinosangana nehunyanzvi hwezvizoro zvakajairwa. Zviuru zvevashandi vekugadzira maartist vanozvishandisa pamamodeli avo, vanogutsa nemavara akanaka anoratidzwa pakutora mifananidzo. Tine chivimbo chekukuvimbisa iwe zvemhando yepamusoro yezvizoro uye mitengo yemakwikwi.
BEST PRODUCTS: Kana iwe uchida kutengesa YEMAHARA mhando yekugadzira zvigadzirwa, zvigadzirwa zvedu ndizvo sarudzo yakanakira iwe. Tinogona kuburitsa zvigadzirwa sekuenderana nezvikumbiro zvako.
Kana iwe ukangotanga rako bhizinesi munzvimbo yezvizoro, kana iwe uchida kuvaka yako maronda, tinogona kudhinda rako rako logo kana marangi pane zvigadzirwa zvedu.
BASA REMAHARA: Tine ruzivo rwakawanda kuronga kurongedza uye dhizaini yako. Tinogona kuronga kutumira kwako zvakare. Izvo chete zvaunoita kuisa odha uye kuronga mubhadharo uye kumirira kuti zvinhu zvisvike. Nekudaro, iwe unogona kugamuchira iyo makeup zvakachengeteka.
Kana iwe uchida isu kuti tikutsigire pakutanga, tichaita zvatinogona kuti tikubatsire. Naizvozvo, iwe unogona kuzadzisa chinangwa chako munguva pfupi.
Unogamuchirwa kuvaka ushamwari hwebhizimusi pamwe neBeautydom. Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Tinotarisira kugamuchira muvhunzo wako. Hatina basa nekungoti hello seshamwari!
JOYO © All Kodzero Dzakachengetedzwa. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Matte Eyeshadow Palette, Shimmer Lipstick, Ndarama Ziso Makeup, Mini Lipstick, Yakanakisa Makeup Brushes, Yakanakisa Cream Eyeshadow, Zvese Zvigadzirwa